ShweMinThar: ဆိတ်ပဲမျှစ်ဟင်းချို - မန်ကျည်းသီးတောင့်ကြော် - ဆီချက်သင်္ဘောသီးသုပ် -ပြောင်းဖူးကြော်
ဆိတ်ပဲမျှစ်ဟင်းချို - မန်ကျည်းသီးတောင့်ကြော် - ဆီချက်သင်္ဘောသီးသုပ် -ပြောင်းဖူးကြော်
ဆိတျပဲမြှဈဟငျးခြိုကို မြှဈခဉျြနဲ့လညျး ခကျြလို့ရသလို ဆိတျသားအသား၊ အမဲသားနဲ့လညျး ခကျြနိုငျပါသေးတယျ။ လူသိနညျးတဲ့ ဟငျးတဈခှကျဖွဈပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျး မှာတော့ ဆိုငျတျောတျောမြားမှာ ဒီဟငျးကို တှနေ့ရေပါပွီ။
ဆိတျသား – ၄ဝဝ ဂရမျ
ဆိတျရိုး – ၃၂၀ ဂရမျ
ကုလားပဲ – ၁၅၀ ဂရမျ
ကုလားပဲပွုတျရနျ ရေ – ၁ လီတာ
မြှဈ – ၂၅၀ ဂရမျ ( ပွုတျပွီးသား)
ဆား – လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ ဇှနျး
အသားမှုနျ့ – လကျဖကျရညျဇှနျး ၂ ဇှနျး
ကွကျသှနျနီ – ၁၅၀ ဂရမျ
ကွကျသှနျဖွူ – ၅၀ ဂရမျ
ခငျြး – ၃၅ ဂရမျ
ငရုတျသီးအရောငျတငျမှုနျ့ – စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
ဆီ – စားပှဲဇှနျး ၄ ဇှနျး
ရေ – ၁.၂ လီတာ
၁။ ကုလားပဲကို ရဆေေးပွီး ရေ ၁ လီတာနဲ့ ပွုတျပါ။
၂။ ကွကျသှနျနီကို ပါးပါးလှီးပွီး ခငျြးနှငျ့ ကွကျသှနျဖွူကို ထောငျးထားပါ။
၃။ ထို့နောကျ အိုးကွီးတဈအိုးထဲ ဆီထညျ့ပါ။ ဆီပူလြှငျ ကွကျသှနျနီနှငျ့ ထောငျးထားတဲ့ ကွကျသှနျဖွူကို ဆီသတျပါ။
၄။ အနံ့မှေးလာလြှငျ နနှငျးမှုနျ့နှငျ့ ငရုတျသီးမှုနျ့ထညျ့ပွီး မှပေါ။ ပွီးလြှငျ ဆိတျသားနှငျ့ ဆိတျရိုးထညျ့ပွီး မှပေါ။
၅။ ပွီးလြှငျ ပွုတျထားတဲ့ ကုလားပဲနဲ့ ကုလားပဲပွုတျရညျထညျ့ပါ။ နောကျထပျရေ ၁.၂ လီတာ ထပျဖွညျ့ပွီး ဆူအောငျ တညျထားပါ။
၆။ ရဆေူလြှငျ ဆားနှငျ့ အသားမှုနျ့ထညျ့ပါ။ မီးအရှိနျလြှော့၍ ဆကျပွီး တညျထားပါ။
၇။ ဆိတျသားနူးခါနီးမှာ ပွုတျထားတဲ့ မြှဈထညျ့ပွီး ဆိတျသားနူးသညျအထိ ခကျြပါ။
• မနျကညျြးသီးတောငျ့ - ၁ဝဝ ဂရမျ
• ငရုတျသီးစိမျး အနီ - ၁၀ တောငျ့
• ငရုတျသီးစိမျး - ၁၅ တောငျ့
• ပုစှနျခွောကျမှုနျ့ - ၅၀ ဂရမျ
• ငံပွာရညျ - စားပှဲဇှနျး ၃ ဇှနျး
• စိမျးစားငါးပိရညျ - စားပှဲဇှနျး ၃ ဇှနျး
• ဆီ - စားပှဲဇှနျး ၅ ဇှနျး
• သကွား - လကျဖကျစားဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ငရုတျသီးအကွမျးဖတျ - ၁၀ ဂရမျ
၁။ မနျကညျြးသီးတောငျ့မြားကို ငရုတျဆုံထဲထညျ့ပွီး ညကျနအေောငျ ထောငျးပါ။
၂။ ဒယျအိုးထဲ ဆီထညျ့၍ ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ ကွကျသှနျနီကိုထညျ့ပွီး ဆီသတျပါ။ အနညျးငယျ နှမျးလာပွီဆိုလြှငျ ငရုတျသီးအကွမျးဖတျနှငျ့ ပုစှနျခွောကျမှုနျ့ကို ထညျ့ပွီး မှပေါ။ ပွီးလြှငျ ငံပွာရညျ၊ စိမျးစားငါးပိရညျနှငျ့ သကွားတို့ကို ထညျ့ပါ။
၃။ ပွီးလြှငျ ထောငျးထားတဲ့ မနျကညျြးသီးတောငျ့နှငျ့ ငရုတျသီးစိမျး/အနီတို့ကို ထညျ့ပွီး ၂-၃ မိနဈခနျ့ ကွျောလိုကျလြှငျ အရသာရှိတဲ့ မနျကညျြးသီးတောငျ့ကွျောလေးကို ရရှိပါပွီ။
• သင်ျဘောသီး - ၂ဝဝ ဂရမျ
• မွပေဲ - ၃၀ ဂရမျ
• ငံပွာရညျ - စားပှဲဇှနျး ၁ ၁/၂ ဇှနျး
• ပုစှနျခွောကျမှုနျ့ - ၁၀ ဂရမျ
• သံပရာသီး - ၁ ခွမျး
• မုနျလာဥနီ - ၄၀ ဂရမျ
• ငရုတျသီးအစိမျးမှုနျ့ - စားပှဲဇှနျး ၁ ဇှနျး
• ငရုတျသီးစိမျး - ၅ တောငျ့
• ပုစှနျခွောကျ - ၂၀ ဂရမျ
၁။ သင်ျဘောသီးကို အခှံနှာ၍ ရဆေေးပွီး ခွဈဖွငျ့ ခွဈထားပါ။
၂။ ကွကျသှနျနီကို အခှံနှာ၍ ရဆေေးပွီး ပါးပါးလှီးထားပါ။ အိုးထဲ ဆီထညျ့ပွီး ပါးပါးလှီး ထားသော ကွကျသှနျနီမြားကို ထညျ့ကွျောပါ။ ကွကျသှနျမြား ရှညေိုရောငျသနျးလာ လြှငျ သီးသနျ့ဆယျယူပွီး မီးပိတျ၍ အပူငှကေ့နျြနသေော ဆီထဲ ငရုတျသီးအစိမျးမှုနျ့ မြား ထညျ့ပွီး ဆီခကျြအနီခကျြပါ။
၃။ ငရုတျသီးစိမျးကို ပါးပါးလှီးပါ။ မုနျလာဥနီကို အခှံနှာပွီး ခွဈဖွငျ့ ခွဈထားပါ။
၄။ ဇလုံတဈလုံးထဲ ခွဈထားသော သင်ျဘောသီးမြား ထညျ့ပွီး ခကျြထားသော ဆီခကျြအနီ မြား ထညျ့ပါ။ ပါးပါးလှီးထားသော ငရုတျသီးစိမျးနှငျ့ ကွကျသှနျကွျောမြား ထညျ့ပွီး ခွဈထားသော မုနျလာဥနီနှငျ့ ထောငျးထားသော မွပေဲမြား ထညျ့ပါ။ အရသာအတှကျ ပုစှနျခွောကျမှုနျ့၊ ငံပွာရညျနှငျ့ သံပရာရညျတို့ကို ထညျ့ပါ။ ပါဝငျပစ်စညျးမြားအားလုံး ထညျ့ပွီးလြှငျ သမအောငျ နယျပါ။
၅။ အရသာမွညျးပွီး ပုစှနျခွောကျမြားဖွူးကာ သုံးဆောငျနိုငျပါပွီ။
• ပွောငျးဖူး - ၁ ဖူး (ပွုတျပွီးသားကို ဓားနှငျ့ခွဈပါ)
• ယိုးဒယားအကွျောမှုနျ့ - ထမငျးစားဇှနျး ၃ ဇှနျး
• ကွျောရနျ ဆီ
၁။ အကွျောမှုနျ့ကို ဆား၊ ကွကျဥတို့နှငျ့ နှံ့အောငျ ပဈြပဈြဖြျောထားပါ။
၂။ ခွဈထားသော ပွောငျးဖူးကို ထညျ့မှပေါ။
၃။ ဆီကို အကွျောမွုပျအောငျ ထညျ့၍ အပူပေးပွီး ထမငျးစားဇှနျးဖွငျ့ အနတေျော ခပျထညျ့ပါ။
၄။ ရှရေောငျသနျးလာလြှငျ ဆီစဈပွီး စားရနျ အသငျ့ဖွဈပါပွီ။
ဆိတ်ပဲမျှစ်ဟင်းချိုကို မျှစ်ချဉ်နဲ့လည်း ချက်လို့ရသလို ဆိတ်သားအသား၊ အမဲသားနဲ့လည်း ချက်နိုင်ပါသေးတယ်။ လူသိနည်းတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း မှာတော့ ဆိုင်တော်တော်များမှာ ဒီဟင်းကို တွေ့နေရပါပြီ။
ဆိတ်သား – ၄၀ဝ ဂရမ်
ဆိတ်ရိုး – ၃၂၀ ဂရမ်
ကုလားပဲ – ၁၅၀ ဂရမ်
ကုလားပဲပြုတ်ရန် ရေ – ၁ လီတာ
မျှစ် – ၂၅၀ ဂရမ် ( ပြုတ်ပြီးသား)
အသားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ – ၁၅၀ ဂရမ်
ကြက်သွန်ဖြူ – ၅၀ ဂရမ်
ချင်း – ၃၅ ဂရမ်
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် – စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ရေ – ၁.၂ လီတာ
နနွင်းမှုန့် – အနည်းငယ်
၁။ ကုလားပဲကို ရေဆေးပြီး ရေ ၁ လီတာနဲ့ ပြုတ်ပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပြီး ချင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို ထောင်းထားပါ။
၃။ ထို့နောက် အိုးကြီးတစ်အိုးထဲ ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူလျှင် ကြက်သွန်နီနှင့် ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီသတ်ပါ။
၄။ အနံ့မွှေးလာလျှင် နနွင်းမှုန့်နှင့် ငရုတ်သီးမှုန့်ထည့်ပြီး မွှေပါ။ ပြီးလျှင် ဆိတ်သားနှင့် ဆိတ်ရိုးထည့်ပြီး မွှေပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ပြုတ်ထားတဲ့ ကုလားပဲနဲ့ ကုလားပဲပြုတ်ရည်ထည့်ပါ။ နောက်ထပ်ရေ ၁.၂ လီတာ ထပ်ဖြည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ထားပါ။
၆။ ရေဆူလျှင် ဆားနှင့် အသားမှုန့်ထည့်ပါ။ မီးအရှိန်လျှော့၍ ဆက်ပြီး တည်ထားပါ။
၇။ ဆိတ်သားနူးခါနီးမှာ ပြုတ်ထားတဲ့ မျှစ်ထည့်ပြီး ဆိတ်သားနူးသည်အထိ ချက်ပါ။
• မန်ကျည်းသီးတောင့် - ၁ဝဝ ဂရမ်
• ငရုတ်သီးစိမ်း အနီ - ၁၀ တောင့်
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၁၅ တောင့်
• ပုစွန်ခြောက်မှုန့် - ၅၀ ဂရမ်
• စိမ်းစားငါးပိရည် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
• သကြား - လက်ဖက်စားဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးအကြမ်းဖတ် - ၁၀ ဂရမ်
၁။ မန်ကျည်းသီးတောင့်များကို ငရုတ်ဆုံထဲထည့်ပြီး ညက်နေအောင် ထောင်းပါ။
၂။ ဒယ်အိုးထဲ ဆီထည့်၍ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီကိုထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနည်းငယ် နွမ်းလာပြီဆိုလျှင် ငရုတ်သီးအကြမ်းဖတ်နှင့် ပုစွန်ခြောက်မှုန့်ကို ထည့်ပြီး မွှေပါ။ ပြီးလျှင် ငံပြာရည်၊ စိမ်းစားငါးပိရည်နှင့် သကြားတို့ကို ထည့်ပါ။
၃။ ပြီးလျှင် ထောင်းထားတဲ့ မန်ကျည်းသီးတောင့်နှင့် ငရုတ်သီးစိမ်း/အနီတို့ကို ထည့်ပြီး ၂-၃ မိနစ်ခန့် ကြော်လိုက်လျှင် အရသာရှိတဲ့ မန်ကျည်းသီးတောင့်ကြော်လေးကို ရရှိပါပြီ။
• သင်္ဘောသီး - ၂ဝဝ ဂရမ်
• ပုစွန်ခြောက်မှုန့် - ၁၀ ဂရမ်
• သံပရာသီး - ၁ ခြမ်း
• မုန်လာဥနီ - ၄၀ ဂရမ်
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅ တောင့်
• ပုစွန်ခြောက် - ၂၀ ဂရမ်
၁။ သင်္ဘောသီးကို အခွံနွှာ၍ ရေဆေးပြီး ခြစ်ဖြင့် ခြစ်ထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာ၍ ရေဆေးပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ။ အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး ပါးပါးလှီး ထားသော ကြက်သွန်နီများကို ထည့်ကြော်ပါ။ ကြက်သွန်များ ရွှေညိုရောင်သန်းလာ လျှင် သီးသန့်ဆယ်ယူပြီး မီးပိတ်၍ အပူငွေ့ကျန်နေသော ဆီထဲ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် များ ထည့်ပြီး ဆီချက်အနီချက်ပါ။
၃။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ပါးပါးလှီးပါ။ မုန်လာဥနီကို အခွံနွှာပြီး ခြစ်ဖြင့် ခြစ်ထားပါ။
၄။ ဇလုံတစ်လုံးထဲ ခြစ်ထားသော သင်္ဘောသီးများ ထည့်ပြီး ချက်ထားသော ဆီချက်အနီ များ ထည့်ပါ။ ပါးပါးလှီးထားသော ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် ကြက်သွန်ကြော်များ ထည့်ပြီး ခြစ်ထားသော မုန်လာဥနီနှင့် ထောင်းထားသော မြေပဲများ ထည့်ပါ။ အရသာအတွက် ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ငံပြာရည်နှင့် သံပရာရည်တို့ကို ထည့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံး ထည့်ပြီးလျှင် သမအောင် နယ်ပါ။
၅။ အရသာမြည်းပြီး ပုစွန်ခြောက်များဖြူးကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
• ပြောင်းဖူး - ၁ ဖူး (ပြုတ်ပြီးသားကို ဓားနှင့်ခြစ်ပါ)
• ယိုးဒယားအကြော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
• ကြော်ရန် ဆီ
၁။ အကြော်မှုန့်ကို ဆား၊ ကြက်ဥတို့နှင့် နှံ့အောင် ပျစ်ပျစ်ဖျော်ထားပါ။
၂။ ခြစ်ထားသော ပြောင်းဖူးကို ထည့်မွှေပါ။
၃။ ဆီကို အကြော်မြုပ်အောင် ထည့်၍ အပူပေးပြီး ထမင်းစားဇွန်းဖြင့် အနေတော် ခပ်ထည့်ပါ။
၄။ ရွှေရောင်သန်းလာလျှင် ဆီစစ်ပြီး စားရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
တောကြက်ချဉ်စပ်ဟင်း - သက်သတ်လွတ်ခရမ်းသီးပေါင်း - ဝက...
သငျ့ဝနျထမျးကောငျးတှေ မဆုံးရှံးစဖေို့ ဘယျလို လုပျမလဲ ?
နကျနဲသော နားလညျမှုရအောငျ စာဖတျနညျး ( in-depth read...
အမဲသားထောင်းကြော် -သခင်​ကြီးငါးပိဖျော်ရည် _ သရက်သီ...
Orthorexia (သို့မဟုတျ) အစားအသောကျရှေးခယျြရာတှငျ စိ...
သဘာဝနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဝါး
Tattoo တက်တူးဖျက်ခြင်း အနုပညာ
Anapana, Samatha and Vipassana
*** အဲကိုး (Echo) ဆိုတာ ဘာလဲ။ ***
ဆိတ်ပဲမျှစ်ဟင်းချို - မန်ကျည်းသီးတောင့်ကြော် - ဆီခ...
ပဋိစ်စသမုပ်ပါဒျ၏ အဓိပ်ပါယျ ရှငျးလငျးခကျြ
သင်အလုပ်မှာ မှားခဲ့ဖူးလား ?
ဝက်နံရိုးမီးတောက်ချက် နဲ့ Dalgola Coffee
Laptop တစ်လုံးဝယ်လျှင် သိထားသင့်သောအချက်များ
Eyebag Fat Removal
Coenzyme Q10 ❓
ဘဲပေါင်းကင် - ပုစွန်ချဉ်သုပ် - စီချွမ့် ချဉ်စပ် ဟ...